Maxkamadda Sare ee Kenya oo go’aan ka Gaartay Doorashadda Kenya – Radio Daljir
Maxkamadda Sare ee Kenya oo go’aan ka Gaartay Doorashadda Kenya
Oktoobar 25, 2017 7:53 b 0
Dalka Kenya waxaa kataagan jahwareer siyaasadeed,iyadoo Maxkamadda ugu sarreysa dalkaasina lagu wado inay maanta go’aan ka soo saarto in ay qabsoomi karto iyo in kale doorashada madaxtinnimada ee ku celiska ah ee loo ballansan yahay in dalkaasi ay ka qabsoonto Khamiista beri ah.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa isaga baxay tartanka, isagoo dhaliilay qaabka uu guddigu u abbaaray qabanqaabada doorashada ku celiska ah.
Waxaa lafilayaa in Maxkamaddu ay ka jawaabto dalab degdeg ah oo loo soo gudbiyay taasi oo ku aadan muranka ka taagan habsmi u socodka hanaanka doorashooyinka oo ay curyaaminayaa xarig jiitan siyaasadeen.
Uhuru Kenyatta Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee dalkaasi Kenya ayaa ku adkeystay in doorashada ay qabsoonto Khamiista,taasi oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin Karin,waxaana dhici kartaa dib u dhac hor leh maadaama maxakamaddu ay sheegayso in ay ka jawaabayso soo jeedino deg deg ah oo soo gaaray.
Hay’adaha Caalamiga ah ee u dood xuqqul insaanka oo kiiskan geeyay maxkamadda ayaa sheegay in aysan Kenya diyaar u ahayn doorasho waxayna rajeynayaan in maxkamaddu ay joojiso doorashadan oo ay ku dhawaaqi doonto in doorasho hor leh la qabto.
Madaxweynaha Farmaajo oo Gaaray Jabuuti Kulana la qaatay Madaxweyne Geelle